Ianaro ny fomba fakana pikantsary amin'ny Kindle | Ireo mpamaky rehetra
Manaova a Pikantsarin'ny Matetika io no iray amin'ireo filàna mahazatra indrindra amin'ny fitaovana rehetra ary mazava ho azy ao amin'ny Kindle, ny olana dia matetika amin'ny ankamaroantsika izay mampiasa ny iray amin'ireo Amazon eReader Tsy hainay ny maka an'ity pikantsary ity, miaraka amin'ny famoizam-po vokatr'izany izay mitarika antsika hanery ny bokotra rehetra hitady ny pikantsary irina.
Mba tsy hamoizanao fanantenana indray mandeha indray, anio dia hasehontsika anao ny fomba fakana pikantsary amin'ny maodely Kindle rehetra izay ananan'i Amazon amin'ny tsena amin'izao fotoana izao.
1 Pikantsary amin'ny Kindle Paperwhite
2 Pikantsary amin'ny Kindle 4
3 Pikantsary amin'ny Kindle Touch
4 Pikantsary amin'ny Kindle 3 (Kindle Keyboard)
5 Pikantsary amin'ny HD Kindle Fire
Pikantsary amin'ny Kindle Paperwhite
Tsy mila manindry fotsiny isika eo amin'ny zorony ankavanana sy amin'ny ankavia ambany, raha efa nahavita an'ity fomba tsotra ity isika, dia tokony hiposaka ny efijery ho porofon'ny fahombiazan'ny fisamborana.
Safidy iray hafa izay miasa amin'ny fomba mitovy amin'izany dia ny fanindriana ny zoro ambony havia sy ny zoro ambany ambany miaraka.
Pikantsary amin'ny Kindle 4
Amin'ity Kindle ity dia tsy maintsy tsindrio ny bokotra fitendry ary tsindrio miaraka hatrany ny bokotra menio, raha nahavita tsara ny fizotrany isika dia hahita tselatra eo amin'ny efijery (tsy dia mahery loatra) izay hanamafy fa vita ny fisamborana. Ho voatahiry ao amin'ny folder "documents" izy ity fa tsy ny lahatahiry natao ho an'ny sary.
Pikantsary amin'ny Kindle Touch
Voalohany indrindra, tsy maintsy tsindrio ny bokotra Start na Home. Izahay dia mikasika ny efijery ary mitazona ny bokotra Home mandritra ny segondra roa. Amin'ity maodely ity dia tsy hahita mariky ny fisamborana isika fa vita soa aman-tsara fa afaka jerena ao amin'ny fakan-kazo amin'ny Kindle.
Pikantsary amin'ny Kindle 3 (Kindle Keyboard)
Mba haka pikantsary dia tsindrio fotsiny ny bokotra Alt + Shift + G.
Pikantsary amin'ny HD Kindle Fire
Ny dingana hakana pikantsary dia tena tsotra ary ny fanindriana ny bokotra herinaratra sy ny bokotra fanindronana mandritra ny segondra roa monja, ny fambara fa nahomby ilay fakana dia ho flash kely.
Nahomby ve ianao tamin'ny fakana ny pikantsary tamin'ny Kindle anao?.
Fanazavana fanampiny - Amazon dia miasa "amin'ny zavatra lehibe kokoa noho ny Kindle"
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » orinasa » Amazon Kindle » Ianaro ny fomba fakana pikantsary amin'ny Kindle
nisioka dia hoy izy:
Ary aiza no itahirizanao ny fisamborana, ao amin'ny lahatahiry?
Valio ny sioka
Ao amin'ny lahatahiry faka.
frida dia hoy izy:
Tsy afaka manao ny pikantsary amin'ny alàlan'ny kindle touch aho
Mamaly an'i frida
Aenny dia hoy izy:
Tsy afaka misambotra amin'ny Kindle Touch koa aho, misy mahalala ny fomba hanaovana izany?
Valiny tamin'i Aenny
Ataoko tonga lafatra, ny dilemma aiza no itahirizana azy?
Ahoana ny fametrahana Caliber amin'ny rafitra GNU / Linux